I-13 / 05 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Meyi 13, 2020
Ngokusho kwezindaba zakamuva esigabeni sezindaba zakwaSivas, iphini le-CHP Sivas u-Ulaş Karasu; Uthe asikho isidingo sokuthi kwakhiwe indawo yamaSulumane esigcawini sedolobha. Isinqumo sokuyeka ukudlala i-Sivas [Okuningi ...]
Ukuthunyelwa Kwemaski Okuphinde Kusetshenziswe Kuzoletha Ukuhamba Emkhakheni Wezindwangu
Usihlalo we-UTİB u-Pınar Taşdelen Engin uthe, "Ukukhishwa kokuthengiswa kabusha kwamaski kabusha ngeke kuhlangabezane nesidingo esikhulu emhlabeni jikelele, kepha kuzothuthukisa imboni yezindwangu. U-Pınar Taşdelen Engin, "Sebenzisa [Okuningi ...]
Isimemezelo mayelana nezinqubo nezinqubomgomo ezizolandelwa kuma-Shopping Mall
Encwadini ethunyelwe ibuya kuMnyango Wezangaphakathi; Ngenkathi iqhubeka nemisebenzi yayo kusukela nge-11.05.2020, ngaphezu kwemithetho enqunywe nguMthetho Wezempilo Nezokuphepha Emsebenzini owenziwe ngama-6331 kanye nemithetho ehlobene nawo; Ukuhlolwa noMnyango Wezentengiso [Okuningi ...]
Ubhubhane lwe-coronavirus oluqubuke eWuhan, China futhi lwasakazeka emhlabeni wonke, lwathinta imikhakha eminingi. Igciwane le-Coronary livela eChina futhi lisakazeka ngokushesha kwamanye amazwe ukukhombisa imiphumela yalo emikhakheni eminingi. [Okuningi ...]
E-DHMI, okuphakathi kokuthola kweSivumelwano Sokuhlangana Kwesikhathi Esingu-5 seSikhungo Sokuhamba Sokuhamba, inkokhelo yesikhathi esengeziwe yaphindwa kathathu. Inkokhelo yokuqala yesikhathi esengeziwe yezinyanga ezingama-2020 ifakwe kuma-akhawunti ngokukhuphuka okuphindwe kathathu. [Okuningi ...]
Ngesikhathi senqubo yokubhubhisa kwe-Covid-19, ethinta umhlaba wonke, I-Istanbul Airport iyaqhubeka nokuyigcina isebenza kahle futhi ihlelelwe ukulungiswa okungu-7/24. Isango laseTurkey emhlabeni, kodwa ngonyaka wokuqala lowo HUBER wembulunga yonke [Okuningi ...]
Ekunakekelweni Kwabafundi Ukufaka Isicelo Sokufunda Ngaphakathi ku-KARDEMİR!
Abafundi abafunda emanyuvesi nasemakholiji abafuna ukwenza umsebenzi wokufunda umsebenzi eKarabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş (KARDEMİR) bakhulume ngesibalo sama-internship ehlobo ahlelelwe ngaphakathi kwezinga lokukhiqiza nokuphatha i-internship. kusuka Kardemir [Okuningi ...]
IDitaş Junction kanye Nokwakhiwa Kwezitimela Okudlula Izitimela Kuqalisiwe
IMeya yaseNiğde u-Emrah Özdemir umemezele ukuthi imisebenzi ye-Ditaş Junction kanye nokudlula kukajantshi sekuqalile. UDitaş Junction, obaluleke kakhulu eNiğde, unezingozi eziningi futhi unamanxeba okuqhuma kwegazi eNiğde. [Okuningi ...]
Abathuthukisi Kwemboni Baqonda Kwezindleko Eziphezulu Zamandla
USihlalo weBursa Chamber of Commerce and Industry (BCCI) u-Ibrahim Burkay, uthe iTurkey izobususa ubunzima lapho ukuhlaselwa komnotho kukhiqiza ngokuqinile, "kodwa-ke, okubambelele emasondweni embonini yethu izindleko eziphakeme zamandla. I-YEKDEM ekuqaleni [Okuningi ...]
Iziteshi Zamatekisi Nama Taxi Zibulawe I-Across Alanya
Ngenkathi uMasipala wase-Alanya uqhubeka nomzabalazo wawo wokulwa nokuqubuka kuka-COVID-19 kuzo zonke izindawo, amatekisi namatekisi ayeke ukusebenza e-Alanya ahlonzwa ngamaqembu aDirectorate of Environmental Protection and Management. Umasipala wase-Alanya, wenziwa esifundeni sonke [Okuningi ...]
Imininingwane ye-Controlled Normalization process Circular in Hotels
Imininingwane yenqubo eyisiyingi enesihloko esithi “Ukulawulwa Kwemvelo Ecacisiwe Yezindawo Zokuhlala” elungiswe nguMnyango Wezamasiko Nezokuvakasha imenyezelwe. Njengoba kwaziwa, ubhubhane lweNew Coronary Virus (COVID-19), olufakiwe esikalini sika "Pandemic" yiWorld Health Organisation, [Okuningi ...]
UMnyango Wezemindeni, Wezabasebenzi Nezenhlalo, Umqondisi Jikelele Wezempilo Nezokuphepha Emsebenzini, ekulweni nezinhlobo ezintsha ze-coronavirus, enezinwele, i-barber kanye ne-salon, izinsiza zokuhlala nendawo yokuhlala [Okuningi ...]
Lapho ufika kula ma-ridges, okuyisifunda esihle kakhulu lapho ungabuka khona lelo panorama elidumile le-Gold Horn; Kutholakala uCofi, oqanjwe ngumbhali odumile waseFrance uPierre Loti. Isithandwa se-Istanbul sangempela sihlala isikhathi eside e-Istanbul [Okuningi ...]
Ibinikezelwe esikhathini esidlule. Ithenda lomugqa wethreyti ka-Izmit Akçaray ekugcineni seliphothuliwe .U-ASSEMBLY ISUZA Engxenyeni yomugqa wethilamu we-Akçaray odlula ku-İzmit Doğu Kışla, impela Mehmet Ali Pasha [Okuningi ...]
Kwamenyezelwa ukuthi isisebenzi sesiteshi sesitimela eLondon, inhlokodolobha yaseNgilandi, sabanjwa yiCovid-19 ngemuva kokuba umgibeli ememeze, "Nginayo i-coronavirus" wayikhafulela kuyo. Ngokusho kwezindaba ze-BBC Turkish; "Inhlangano yezokuThutha ye-TSSA [Okuningi ...]
Izindlela Zokubambisana Zase-Edirne Istanbul kanye namanani amathikithi; I-TCDD Taşımacılık A.Ş. ngo Halkalı Kukhona indiza ye-1 yokubuyisa phakathi kweKapıkule. Halkalı Isikhathi sokuhamba esiphakathi kweKapıkule 4 [Okuningi ...]
Umphathiswa Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda u-Adil Karaismailoğlu, izinyathelo ze-Covidien-19 ngokwesimo sokuhwebelana kwangaphandle zanda isidingo seBaku-Tbilisi-Kars Railway (BTK) umugqa wamathani ayizinkulungwane ezintathu namakhulu ayisi-3 amandla ongezekile azovumela uhlelo oluthuthukile lokuthuthwa kweziqukathi zaseTurkey eGeorgia [Okuningi ...]
Izipho ze-Pedestrian overpass Izipho ezise-Izmit zihlanzwa kaningi
Ukudlula kwabantu abahamba ngezinyawo kubaluleke kakhulu ekuthuthweni okuphephile kwezakhamizi, ikakhulukazi empilweni yasemadolobheni. Izakhamizi ezindala nezikhubazekile ngokuvamile zisebenzisa iziphakamiso ngokweqile. IKocaeli Metropolitan Municipality Parks and Gardens department [Okuningi ...]
Kwa-AKINCI TİHA, izinjini eziyi-12 zanikezwa zivela e-Ukraine
Kwachazwa ukuthi izinjini eziyi-12 zahlinzekelwa ukusetshenziswa ku-AKINCI Offensive Unmanned Aerial Vehicle (TİHA), eklanywe ngabonjiniyela beBaykar Defense futhi inqubo yabo yokukhiqiza iyaqhubeka. "National Industrial" esebenza e-Ukraine [Okuningi ...]
Amafemu amasha ayi-15 7 avulwa kwikota yokuqala e-Istanbul, amafemu ayinkulungwane ayi-XNUMX avaliwe
Held e-Istanbul, lapho amaphesenti ama-43 okuthunyelwa kweTurkey, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwehle ngamaphesenti angama-36,9 ngo-Ephreli uma kuqhathaniswa nonyaka owedlule. Ngenkathi ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwehla embonini yokulungela ukugqoka nezingubo, inyuke emkhakheni wezokuvikela nowezindiza. Iningi [Okuningi ...]
'Amasosha Amancane' we-Big Missions Black Hornet ne-Aselsan Nano UAV
U-ASELSAN okokuqala wembula imoto yakhe eyi-Nano Unmanned Aerial Vehicle (Nano-UAV) eTEKNOFEST'19 isikhashana. Ingenziwa ezindaweni ezivulekile nezizivaliwe zokutholwa, ukubhekwa kanye nezinhloso zobuhlakani [Okuningi ...]
U-amomamoğlu Wenze i-Iftar Yokuqala Yokubumbana Yonyaka Nabasebenzi BaseMetro Ezokwakha
UMongameli we-BBB u-Ekrem İmamoğlu ubengenakuyibona i-iftar eyenziwe ngokwesiko emizini yezakhamizi ngenxa yenqubo ebhubhisayo kulo nyaka. U-İmamoğlu, owenza i -tartar yokuqala yonyaka nabasebenzi bakwa-Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Line, uthe, “KuRamadan, imvamisa [Okuningi ...]
Izmirians azange zidedele lezo zindlela zokuhamba
Ngokwe-Izmir Metropolitan Municipality Directorate Directorate yedatha, amanani egibela ezinsuku ezimbili zokuqala enyuke ngesilinganiso samaphesenti ayi-11 ngeviki kaMeyi 14 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo seviki eledlule. Ithebula liyenelisa [Okuningi ...]
Usuku lokuzalwa lukaFlorence Nightingale, umsunguli womsebenzi wabahlengikazi, ubhekwa njengoSuku Lomhlengikazi Lomhlaba ngoMeyi 12, futhi isonto lelo suku liqala ukugujwa njengeVeki Lomhlengikazi Lomhlaba wonke emhlabeni wonke. Uzalelwe istanbul [Okuningi ...]